जानकी फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १ पुस २०७२)
कम्पनीको २०७२/७३ आवको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा रू. १६ लाख ८५ हजार पुगेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ७० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो भने हालै सम्पन्न साधारणसभाले थप २५ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्तावपारित गरेको छ । गत आवमा रहेको रू. ७ लाख ७७ हजार खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएको छ प्राविधिक विश्लेषण,आरएसआई : न्यूट्रल जोन (५८ दशमलव ५९ स्केल)मा छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन १६ दशमलव ४८ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : अल्पकालीन २१ दिने औसत मूल्य रेखा र ७ दिने मूल्य रेखा एक अर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य २१ दिने रेखाभन्दा तल छ भने ७ दिने रेखा र ट्रेण्ड लाइनभन्दा माथि छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ३ सय १९ मा टेवा पाउने र महँगिएमा रू.३ सय ८० मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ । आधारभूत विश्लेषण
कम्पनीको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २०७२/७३ आर्थिक वर्ष र २०७१/७२ आर्थिक वर्षबीच तुलना गर्दा :
- आवको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ७९ दशमलव २३ प्रतिशतले घटेकोे छ । सञ्चालन मुनाफा ८० प्रतिशत र खुद व्याज आम्दानी ६० दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेपछि खुद नाफा घट्न पुगेको हो ।
- ब्याज आम्दानी १५ दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको छ भने व्याज खर्च १ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ ।
- कर्मचारी खर्च ९ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेर रू. १८ लाख ४० हजार पुगेको छ । अन्य सञ्चालन खर्च २४ दशमलव ६२ प्रतिशतले र कुल सञ्चालन आम्दानी ६१ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटेको छ ।
- कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा ५ दशमलव ३५ प्रतिशत विन्दु रहेको छ भने सीडी रेशियो ६४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रावधान अनुसार कम्पनीले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।
- पूँजीकोष लागत ७ दशमलव ८९ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता ३० प्रतिशत रहेको छ ।
- कम्पनीको तरलता अनुपात ३० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । गत असोज मसान्तसम्म विगत १२ महीनाको आम्दानीका आधारमा पीई रेशियो साढे १२ गुणा र प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव ३५ छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको २ गुणा मात्र छ ।